The Ab Presents Nepal » छवि ओझासँग रेखा थापाले डिभोर्सपछि ८० लाख छाड्दा शिल्पा पोखरेलको डिमाण्ड कति ? वकिलले गरे गम्भीर खुलासा (पुरा भिडियो)
छवि ओझासँग रेखा थापाले डिभोर्सपछि ८० लाख छाड्दा शिल्पा पोखरेलको डिमाण्ड कति ? वकिलले गरे गम्भीर खुलासा (पुरा भिडियो)
काठमाडौँ -: अभिनेत्री शिल्पा पोखरेलले आफ्नो श्रीमान छविराज ओझा विरुद्ध एकाएक प्रहरीमा उजु*री गरेपछि माहोल गर्माएको थियो । तर गत बिहिबार निर्माता छविराज ओझा र नायिका शिल्पा पोखरलेबिच महानगरीय प्रहरी परिसर,टेकुमा सहमति भएको छ ।शिल्पाले घरेलु हिं*सा भएको भन्दै काठमाण्डौ प्रहरी परिसरमा पति छविराज ओझा विरुद्ध उ*जुरी गरेकी थिइन् । छवि र शिल्पाले विवाह भएको लुकाउँदै आएका थिए । एकाएक डिर्भाेसको खबर आउँदा माहोल निकै तातेको थियो । छविराज ओझाकी शिल्पा चौथो श्रीमती हुन् ।
उनले ओझाले निर्माण गरेको फिल्म ‘लज्जा’बाट चलचित्रमा डेब्यु गरेकी हुन् ।उनीहरु बीच आगामी दिनमा झगडा नगर्ने भन्दै लिखित सम्भौता भएको हो । तर, ओझाले डिर्भोस नदिने उल्लेख गरेका छन् ‘।
घरझगडा भएपछि शिल्पा अहिले दाई बनाएकी विकाश रौनियारको घरमा बस्दै आएकी छिन् ।टेकु निस्किएपछि पनि शिल्पा दाइ रौनियारकै गाडीमा बसेर गइन् । गाडीमा उनी रोइ रहेकी देखिन्थिन् ।प्रतिक्रिया दिनुस भनेपछि शिल्पाले भनिन -मलाई जे पर्यो मैले भोगे, कसैलाई दुख्दैन मलाई मात्र दुख्छ, यदि कसैलाई त्यस्तै पिर परेको छ त्यस्तै पिडा परेको छ भने कृपया आउन सक्नु हुन्छ ‘।
;म आए भने तपाईहरु पनि नडराई आउनु ।पछिल्लो पटक शिल्पा पोखरेलले छवी ओझालाई डिभोर्सको केस फाइल गरिसकेकी छिन । त्यो खबर सुनेर छबीले अझै पनि शिल्पासंगै जिउने भन्दै खुल्ला पत्र समेत लेखेका छन ।छबी र शिल्पाको विषयले सामाजिक संजालमा निक्कै ठुलो क्रिया प्रतिक्रिया पनि चलेको छ । यसै बीच एक अधिवक्ताले उनीहरुको सम्बन्ध र सम्बन्ध विक्षतको बारेमा बोलेका छन; ।
भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस-: